Weerar isugu jira Qaraxyo & mid toosa oo lagu qaaday Saldhig ay AMISOM ku leeyihiin G/Sh/Hoose - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Weerar isugu jira Qaraxyo & mid toosa oo lagu qaaday Saldhig ay AMISOM ku leeyihiin G/Sh/Hoose
Muqdisho (Caasimada Online)-Wararka naga soo gaaraya Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegaya in maleeshiyaadka al-Shabaab ay weerar ku qaaden Saldhig ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin Gobolka.
Maleeshiyada al-Shabaab ayaa weerarka kasoo qaaday dhowr jiho, waxaana la sheegay in weerarka uu isugu jiray Qaraxyo iyo mid fool-ka-fool ah.
Maleeshiyada ayaa weerarka ku qaaday Saldhigyada ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan Gobolka Shabellaha hoose, gaar ahaan deegaanka Golweyn.
Weerarka ayaa dhacay saqdii dhexe ee Xalay xili ay ciidamada AMISOM ku guda jireen tamashleyn, waxaana lasoo sheegayaa in weerarka uu ka dhashay khasaaro xoogan oo labada dhinac ah.
Maleeshiyada ayaa weerar kaa lamid ah ku qaaday Saldhiga ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin deegaanka Ambareeso ee Gobolka Shabellaha hoose, waxaana sidoo kale la sheegayaa in weerarkaas uu ka dhashay khasaaro xoogan.
Sidoo kale, maleeshiyada al-Shabaab ayaa Qarax miino ka geysatay Degmada Qoryooley, gaar ahaan goob ay isugu yimaadaan ciidamada, waxaana qaraxaasi ka dhashay khasaare ugu yaraan, hal askari ayaa halkaasi ku dhintay.
Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegay inuu jiro khasaare ka dhashay weerarkaasi oo soo gaaray ciidamada AMISOM ee Saldhigaasi lagu weeraray.
Si kastaba ha ahaatee, Saraakiisha ciidamada AMISOM ayaan ka hadal khasaaraha ka dhashay weerarka waxaana lasoo warinayaa in saaka Saldhiga la weeraray diyaarado looga guraayo dhaawacyo iyo Meydad dhowr ah.
The post Weerar isugu jira Qaraxyo & mid toosa oo lagu qaaday Saldhig ay AMISOM ku leeyihiin G/Sh/Hoose appeared first on Caasimada Online.